ဖတ်ပြီးလျင် ဆဲဖို့မမေ့ပါနှင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖတ်ပြီးလျင် ဆဲဖို့မမေ့ပါနှင့်
ဖတ်ပြီးလျင် ဆဲဖို့မမေ့ပါနှင့်
Posted by nigimi77 on Jun 21, 2013 in Copy/Paste, Cultures, History | 30 comments
အခုလည်း ဖတ်ရုံ သပ်သပ်လောက်ပဲ အာရုံကလာတယ်
ဆိုတော့………သူတပါး ရေးထားတာကို Copy လုပ်ပေးလိုက်တယ်
ဖတ်ပြီးရင်တော့ ဆဲဖို့ မမေ့ပါနဲ့……. ဒါမှ ဗမာ ပီသမယ် ….. ငိငိ
Credit to leebamar
ဒို့ ဗမာ သာကီမျိုး ဟာမို့၊ မညှိုးဂုဏ်တေဇာ” ဆိုပြီးတော့ ရေးတဲ့ သူကလည်း ရေး၊ ဆိုတဲ့ သူတွေ ကလည်း အားပါးတရ ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန်ကို တက်ကြွ စေတယ် ဆိုတာ ကောင်းတာပေါ့။ သို့သော် တကယ်တမ်း မှာတော့ အလိုလို နေရင်း သွေးနထင် ရောက်ပြီး ဘ၀င် လေဟပ်တဲ့ မဟာဗမာ အယူအဆ မျိုးတွေပဲ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပြည့်တဲ့အိုးကတော့ ဘယ်တော့မှာ ဘောင်ဘင် မခတ်ပါဘူး။ မပြည့်လို့ ဒီလိုတွေ အော်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကောင်းရင် ကိုယ့်အကြောင်း သူများရေးသွားလိမ့်မယ် ကိုယ်တိုင် ရေးစရာမလိုဘူး။
ဗမာဆိုတဲ့ လူမျိုးကို ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင် နှင့် ရှမ်း တွေ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲ ဆိုတော့ အပြောချိုသလောက် အင်မတန်မှ ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် များပြီး ကောက်ကျစ် ကလိမ်ကျတဲ့ လူမျိုးဆိုပြီး မြင်ကြတာဖြစ်တယ်။ ကျွဲကို ဤ ဖြစ်အောင် ပြောတတ်သလို ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင်လဲ လူယုံအောင် ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ယနေ့အချိန်အထိ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ညစ်ကျယ်ကျယ် နဲ့ ကောက်ကျစ်လွန်း ဗမာ တွေနဲ့ အတူမနေခြင်လို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူပ်ခွင့်တွေတောင်းနေကြတာ ကမ္ဘာ အသိဘဲဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်တည်း မှာပဲ မိုက်တယ်၊ ရိုင်းတယ်၊ ၃၈ ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်ကို ဦးထိပ်ထား အကြောင်း ပြပြီး အအားနေ အပျင်းထွေ တတ်သေးတယ်။ ဝတ်ဖို့ စားဖို့ ဖျင်ထည် ရက်လုပ်တဲ့ ၀ါဂွမ်း စိုက်ပျိုးမှု နည်းပါးတော့ အင်္ကျီ မကပ်ပဲ ကျောပြောင် ကြီးတွေနဲ့နေလေ့ ရှိကြတယ်။ ရာသီဥတု ကလည်း ပူအိုက်တော့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွား သပေါ့။ လေလည် မိရင် သေမလောက် ရှက်ကြပြီး သားသည် အမေတွေ ကျတော့ ရင်တုံးလုံး နဲ့ မရှက် မကြောက် နေကြ ပြန်သေးတယ်။ ယောင်္ကျား ထိုးကွင်း၊ မိန်းမညှင်း၊ ဒါကိုပဲ အလှတပါး လို့ ယူဆ ကြပြန်တယ်။
ဗမာပြည်ကို မွန်၊ ရခိုင် ရှမ်းနဲ့ ကရင် တိုင်းရင်းသား တွေနောက်မှ ဝင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဗမာတွေ စတင်ရောက်ရှိအခြေချတဲ့နေရာက မိုးခေါင်ရေရှား မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အညာဒေသမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလို နဲ့ပဲ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင် စနစ်ကို အများ နည်းတူ ထူထောင် ကြတဲ့ အခါ ရှင်ဘုရင် လုပ်တဲ့ သူက ဘာသာရေး တရားတွေထဲ ပါနေကျ ဇာတ်လိုက် ကျော်ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကံ ကြီးမားတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ အမျိုးမြတ်သော ဘုရင် မင်းတရား တွေနဲ့ ဇွတ်အတင်း ဆွေမျိုး စပ်ကြ တော့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဆွေစဉ် မျိုးဆက် မဟုတ်ပဲ ကြားက ဖောက်ပြီး ဘုရင် ဖြစ်လာတဲ့ ငတပါး မင်းတွေ ဆိုရင် ပိုပြီး ပြောတတ် ကြတယ်။
ထီးလိုင်မင်း ခေါ် ကျန်စစ်သား၊ မင်းကြီး စွာစော်ကဲ၊ ဟံသာဝတီ ဆင်ဖြူရှင် နဲ့ အလောင်းဘုရား ဦးအောင်ဇေယျ တို့ဟာ ဘုရင် မျိုးရိုး မဟုတ်ပဲ မင်းတက် ဖြစ်တော့ ငါ့ အမျိုးဟာ ပြာမှေး မီးခဲလို ခဏ တိမ်မြုပ် နေရှာတာ။ အရင်း စစ်တော့ ဘုရားမျိုးကွ လို့ကောင်းသည်ထက် ကောင်းအောင် ရှာကြံ ကြွေးကြော် ရရှာတယ်။ ဒါမှ လူလေးစား မှာလို့ ထင်ကြ တာကိုး။ ရာဇ၀င် ဆရာများ လည်း ရှင်ဘုရင့် မျက်နှာ ကြည့်ပြီး ထမင်းစား ရတဲ့ လူတွေ ဆိုတော့ ဘုရင် လုပ်သမျှ ဟုတ်သပ ပေါ့လေ။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းက နေနန်ကျောင်နဲ့ မွန်ဂို နှိပ်စက်လို့ ပြေးလာ ကြရင်း၊ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာမှာ အခြေချကြ ရာက ဗမာ ဖြစ်လာတယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်း ယူဆချက်ကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အင်မတန် နားခါးတယ်။ ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့်အဆွေကို အောက်ခြေ လွတ်အောင် မဟားတရား မြှောက်ပင့် ပေးရာမှာ ထူးချွန်လှတဲ့ အတွက် သကျသာကီဝင် မင်းမျိုးတွေ တကောင်း ရောက်ရာက မြန်မာမျိုး စခဲ့တယ် ဆိုပြီး ဘုရားနဲ့ အတင်းအဓမ္မ ဆွေမျိုးစပ်ရတာမျိုးကို သိပ် သဘော ခွေ့တာပေါ့။
ဒါတောင် ဗြဟ္မာကြီး လေးဦး လူ့ ပြည်ကို အလည် လာရာက မြေဆီ သြဇာတွေ စားပြီး ဗြဟ္မာ့ပြည် မပြန်နိုင်ပဲ လူအသွင် ပြောင်းလာ ရာက မြန်မာ စဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး ပြောချင် သေးတာ။ ယုတ္တိ မတန်လွန်းလို့ သာ မပြောတာ။ မှန်နန်း ရာဇဝင်က ရှင်ဘုရင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပြီး ရာဇဝင်ကို သုတ်သင် ပြုစုတော် မူ၍ အမှားကို အမှား၊ အမှန်ကို အမှန်၊ မဖောက် မပြန် မှတ်သားရ ပေသည်လို့ ခပ်တည်တည် ပြောပြီး ရှင်ဘုရင်မင်းဆက် စာရင်းကို ချရေးရာမှာ-
မဟာသမ္မတမှအလောင်းဘုရားထိမင်းပေါင်း- ၃၃၄၆၆၉ ဆိုပြီး တွယ်ထည့် လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာတွေ ကလည်း ဒါမျိုးကို အများ ရှေ့မှာ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ကြွားလုံး ထုတ် ပြောတတ်အောင် သင်ပေး ထားတဲ့ ရှေးစကားလို့ နှလုံး ပိုက်ပြီး “ဟယ်-အံ့သြစရာကြီး ပါလားနော်” လို့ မြည်တမ်းရင်း အံ့သြ ချင်ယောင် ဆောင်ရင်း လက်ခံ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြောနေရင် လူတွေ မယုံမှာ စိုးပြန်တော့ ပွဲကျောင်း ဆိုတဲ့ လောကီပညာသင် ဘုန်းကြီးများ ကနေ တဆင့် “အာဒိစ္စကုလသမ္ဘူ တောသုဝိသုဒ္ဓဂုဏကာရော” စတဲ့ ပါဠိ ဂါထာလေးတွေ ထွင်ခိုင်းပြီး သကျသာကီဝင် အစစ် အမှန်ဆိုတာကို ဘုရားကပဲ ဟောထား သလိုလို ဘုရားကို သက်သေ လုပ်ခိုင်းပြန်ပါတယ်။ ရဟန်းတွေကအစ မုသာဝါဒ ကံကို ကျူးလွန်ပြီး မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ်ပြီး ပြောခဲ့ကြတာလေ။
ဆိုပြီး မဟာသမ္မတ၊ သုဒ္ဓေါဓနနဲ့ အလောင်းမင်းတရား ဦးအောင်ဇေယျတို့ ကို တစ်အူတုံဆင်းတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ် လိုက်ကြတယ်။ ဒါမျိုးကို ကုန်းဘောင်ခေတ် ကျမှ မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင် တွေ့ ရတယ် ဆိုပေမဲ့ ပုဂံခေတ် ကတည်းက ထိလိုင်မင်း ခေါ် ကျန်စစ်သားတို့ လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ လမ်းရိုး ကြီးပါ။ ကျန်စစ်သား ခမျာ မတော့ ပါဠိပါတ်သားတွေ၊ အကိုး အကားတွေ သိပ် မပြည့်စုံ ရှာတော့ ဆရာဘုန်းတော်ကြီး တွေကို ကြော်ငြာခိုင်းတဲ့ ဓလေ့လဲ မထွန်းကား သေးတော့ “ငါ့အဖေက နေမျိုး၊ ငါ့အမေက ဥသျှစ်သစ်မျိုး ကနေ ငါ ပေါက်ဖွားလာတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်က ပိဿနိုး နတ်မင်းကြီး ဝင်စားတာ ပေါ့သေးသေး မမှတ်နဲ့ ”လို့ သူကိုယ်တိုင် ကျောက်စာ ထွင်းပြီး ကြော်ငြာ ခဲ့ရရှာတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ရှိတဲ့မိထ္ဘိလာ၊ ရာဇပြိုလ်၊ သာဝထ္ဘိ၊ အာယုဒ္ဓိယ စတဲ့ နာမည်တွေကို မြန်မာ ပြည်တွင်းမှာ ယူမှည့် ပြီးတော့ အိန္ဒိယက အဖြစ်အပျက် တွေကို ဒီမှာ ဖြစ်ခဲ့ တာလို့ အာပေါင် အာရင်း သန်သန် ဇွတ်ပြောပြီး ဇွတ်ယုံ လာကြပါတယ်။ ကျန်စစ်သား အကြောင်း နှုတ်ပြော ရာဇ၀င်မှာ အမြဲ ပါလေ့ရှိတဲ့ သားလေးမွေးရင် ပေးခဲ့တဲ့ လက်စွပ်တော်နဲ့ နန်းတော်ကို လိုက်ခဲ့ဆိုတာ ကလည်း ငါးရာ့ငါးဆယ် နိပါတ်တော်က ဇာတ်နံပါတ် (၇) ပါ။ ဘုရင့်နောင် ကိုလည်း အဲဒီလို ဇာတ်လမ်းမျိုး ထွင်ပြော ခဲ့ကြတာပဲ။ အနိရုဒ္ဓရဲ့ စီမံခန့် ခွဲမှု ကောင်းမွန်ပြီး တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ကောင်းလာလို့ ပုဂံနေပြည်တော်မှာ သာသနိက အဆောက် အဦတွေ တိုးတက် များပြား လာပြန်တော့ ရှင်အစ္စဂေါဏရဲ့ ရွေဖြစ်ငွေဖြစ် အဂိရတ် စွမ်းကြောင့် မုဆိုးမေ တွတောင် စေတီ တည်ကုန်လို့ပုဂံမှာ စေတီ ပုထိုးပေါင်း၄၄၄၆၀၃၃ လေးသန်းကျော် ရှိတယ်ကွ။ မမေ့အောင် “လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ပုဂံဘုရားပေါင်း”လို့ မှတ်ကြကွ ဆိုပြီး လုပ်လာ ပြန်ပါတယ်။ ၁၅ မိုင် ပတ်လည်လောက် ရှိတဲ့ မြို့ကလေးမှာ စေတီပုထိုး လေးသန်း လေးသိန်းကျော် စိတ်နဲ့ ပဲ မှန်းပြီး နေရာ ချကြည့် ကြစမ်းပါ။ လူနေဖို့ နေရာရော ကျန်နိုင် သေးရဲ့ လား။ ဒါနဲ့ ပဲ လေးသန်း လေးသိန်းကျော် ကတော့ နည်းနည်း များလွန်းတယ်။ လေးထောင်လောက် လုပ်လိုက် ဆိုပြီး အဖတ်ဆည် ပြန်တယ်။ သုတေသန လုပ်ကြည့်လို့ စေတီ နှစ်ထောင်ကျော်သာ ရှိပါတယ်လို့ အဖြေ ထွက်လာတော့ ရေတိုက်စားပြီး ကမ်းပြိုရာမှာ ပါသွားပြီလို့ လုပ်ကြ ပြန်ပါရော။ တတ်လည်း တတ်နိုင် ကြပါပေတယ်ဗျား။
ဒါကလေးနဲ့ များ ငြိ နေလား မသိပါဘူး…….
ဒါပေမယ့်.. ဟိုတနေ့ကပဲ.. ဦးရွှေမန်း ..ဆန်ဖရန်ကဒင်နာပွဲမှာပြောတယ်..။
သူကိုယ်တိုင်ကနေစပြီး.. ဘေးက လွှတ်တော်အမတ်တွေထိ.. ဘိုးဘွားဘီဘင်အမျိုးစပ် လှည့်မေးပြတယ်..
ဟိုဟာသွေးနှော. ဒီဟာသွေးရောနဲ့.. စိနပြည်ကပြေးလာတယ်ဆိုတဲ့.. မြန်မာ့သွေးအစစ်မရှိတော့ဘူးဆိုပဲ..။
ဗမာဖက်ကနေ..သွေးစပ်ပြပြီး.. အထောက်အထားခိုင်ခိုင်နဲ့.. ဖျက်ခိုင်းရင်.. ကိုယ်ရင့်စာ..(တကယ်တော့ ကော်ပီ) ဖျက်ပါမယ်..။
ဗမာတွေ ဘယ်ပျောက်သွားသလဲ…ငါ..ဒီမှာဟေ့လို့ အော်လိုက်ချင်တယ်။
ကျွန်တော် အဘေး အထိ စစ်ကြောင်း ပြနိုင်တယ်… သဂျီး ဖျက်ပေးမလားဟင်…………
လိုအပ်လာရင် မင်းတုန်းမင်း လက်ထပ်အထိ ဆွေမျိုး ဇယား ပြလို့ ရတယ်…. ကြည့်ချင်ရင် မန္တလေး လိုက်ခဲ့…….
ရာဇ၀င်ထဲမှာ ကျုပ်ကို ထားရစ်ခဲ့ပါ ကိုတိမ်မည်း
ကျုပ် သိတဲ့ လူ နှစ်ယောက်ကလွဲလို့ 
ကျန်တာတွေက တရုပ်တွေများလားလို့ ပါ
ဟီး မင်းတွေ ချပေါင်းတော့
မင်းတပါးကို ပျမ်းမျှ ၃ နှစ်ထား
နှစ်ပေါင်း ၃၀၁၁၇၉၃ ဟီးးးး
ကိုယ်မသိလိုက်ဖူးကွယ်….ဟုတ်တယ် ?… ကိုယ်မသိလိုက်ဖူးကွယ်…….
ခု လက် ရှိ မြန် မာ နိူင် ငံ……ဗ မာ လူ မျိုးဆို တဲ့ အ မည် မ ပျောက် အောင် သာ ကြိုး စား ကြ ပါ တော့…….။
ဒူ့ ကို ဆဲရမှာဒုန်း ဟမ်??
ဖတ်ပြီး ကိုယ် ဆဲ ချင်တဲ့ လူ ကို ဆဲလို့ ရလား ဟမ်??
ချင့်ယုံ ချင့်ယုံ… အရာရာကို ချင့်ယုံ ကြစေကုန်သတည်း ………….
အူးကြောင်ကြီး နဲ့မပု ကို ဆဲ
ခီညားတို့ဒေဂယဲ …. တောက်ရီးတောက်ကျယ်တွေ …. ပုံဂျီးချဲ့ဂျဒါဗြဲ …..
ညန်မာ ချိုယင် … လူငြိုးကိုပဲ တွားတွားကျိဂျဒယ် …….. ။
ညန်မာချိုဒဲ့ အတုံးနှုန်းဂို ….တဂွက်ဇာ လူငြိုးအနေနဲ့ မ၀ုတ်ဗြဲ …….. နိုင်ဂံတားဂိုဇားပု အနေနဲ့ ညင်ကျိချမ်းဘာာ…..
နေတတ်ယင် ကျေနပ်ချာရီးဗဲ …. ခိခိ
မှတ်ခရု မှတ်ခရု :mrgreen
ဆဲရ မှာစိုးလို့ မဖတ်တော့ဘူး။
ဟာ ဖရဲမ မျက်စိ လည် လမ်းမှားလာတာလား။
ဖတ် သွားတယ် အစ်ကို ရေ့ 
ဆဲဖို့ တော့ မေ့ သွားတယ်ဗျ
သခင်မျိုးဟေ့ ဒိုဘာမန် ဆိုလား… ဒဂျီးပြောတာတော့..
နောင်ဒါမျိုးတွေ ပဲရေးမယ် ဆို ဖတ်ပုံဖတ်နည်း သင်ပေးပါအုံးးးးးးးးးးးးး။
အခမဲ့သင်တန်းပေးသည် … ခိခိ
နေပူတာ မကျေနပ်လို့ မိုးပေါ်ထောင် သေးပန်းပြသလိုပဲ… နောက်ဆုံးကိုယ့်ဆီ ပြန်ကျလာမယ်။ သွား.. အဲဒီထဲ ငါမပါဝူး.. သာကီဝင်မျိုး နေမျိုးနေနွယ် အဂ္ဂမဟာ သွားရည်တမြှားမြှား ဦးကြောင်ကြီး..ကွ… (ဆိုင်ကယ်စီးလို့ပါ)
ကိုယ်နဲ့ အနေသာကြီးလို့ ပဲ သဘောထားကြီးလိုက်ပါတယ်လေ
သူတို့ ဘာသာရေးချင်ရာ ရေးတဲ့ ဥဆာ
ဂဏန်းကြီးကို ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ။
ဒီထဲက စာတချို့ကို ဒေါက်တာ စိုးမင်း(ငွေစန်းရောင်)ရဲ့ ဘာပဲပြောပြော ရာဇ၀င်ရှိတယ် စာအုပ်မှာ သင့်လူရေးပေးတဲံ့အမှာထဲလည်း တွေ့မိတယ်။
(မဟာသမတမင်းမှ ဥက္ကာကရာဇ်အထိ မင်းပေါင်း- ၂၅၂၅၅၆
မဟာသမ္မတမှအလောင်းဘုရားထိမင်းပေါင်း- ၃၃၄၆၆၉ ဆိုပြီး တွယ်ထည့် လိုက်ပါတယ်။)
ရွှေတိဂုံ..။ ကျိုက်ထီးရိုး..။ ရွှေစက်တော်…။ မန္တလေးတောင်..။ မဟာမြတ်မုနိတို့.. ဘုရားသမိုင်းတွေထင်ရှားရှိနေပြီး.. မကြာကလေးတင်ကမှ.. ရွှေတိဂုံ ၂၆၀၀ ဆိုလားလုပ်… သမိုင်းပညာရှင်ထက်တော်ကြတတ်ကြတဲ့.. ဒေါက်တာကြီးတွေကိုယ်တိုင်.. အတည်ပြုပေးထားတာပဲ..ဟာပဲ..ဟာကို.. ပဲဟာပဲကို… ကွယ်…
အတည်ပြုတာက.. ပြဿနာမဟုတ်.. ပရိုမဟုတ်သူပြောတာကို.. တကယ်ယုံသွားကြတာက ပြသနာမို့…
ယုံလိုက်.. ယုန်ရုပ်ရေးပြီး.. ယုန်လိုက်…။
ဗမာ(တိဘက်တိုဘားမန်း)ဆိုတာ.. မြန်မာ့နယ်မြေထဲဝင်လာတာမှာ.. မွန်-ခမာဇာတိနွယ်တို့ထက်နောက်ကျပြီး.. ရှမ်း(တိုင်)ထက်စောတယ်လို့… သမိုင်းပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်…။
မြန်မာ့မြေမှာ.. မြန်မာက.. မွန်ထက်စာရင်.. ဧည့်သည်ဖြစ်ပြီး.. ရှမ်းထက်စာရင် အိမ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်..။
ဘာသာသာသနာမှာလည်း.. မြန်မာပြည်ကိုအစောဆုံးရောက်တာ.. (နတ်ကိုးကွယ်မှုပြီးရင်).. ဟိန္ဒူဘာသာ သာသနာဖြစ်ပြီး.. ဗုဒ္ဓဘာသာက နောက်မှဖြစ်ပါတယ်..။
ပထမမြန်မာနိုင်ငံကစလို့.. နှစ် ၁၀၀၀ ခရီးလောက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါ.. ဗမာ(တိဘက်တို-ဘားမန်း)ဟာ..အတူနေတဲ့..တခြားဇာတိနွယ်တွေနဲ့.. သွေးမရောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး..။ ပျူတွေမျိုးပျောက်နေတာကြည့်ရင်ကို သိသာမှာပါ..။
ပုဂံခေတ် နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေမှာ.. မြန်မာမင်းမျိုးနွယ်ပုံရေးပန်းချီတွေနဲ့အတူတူ.. အသားဖြူမဲဝါ အမျိုးသမီးပုံတွေရှိတာကြည့်ရင်..ပတ်လည်ရိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်.. မွေးထွက်တဲ့ကလေးတွေ.. ဘယ်လိုသွေးနှောကြမလည်း.. တွေးကြည့်..အသိသာကြီးပါ…။
ဗမာစစ်စစ်ဆိုတာ.. အိန္ဒိယ၊စိန၊မွန်-ခမာ၊ ရှမ်း၊ အနွယ်ကြီးတွေအကုန်ရောသမမွှေတဲ့ လူကိုခေါ်ရမှာပေါ့…။
အခုခေတ်… အ၀တ်အစားပဲကြည့်.. ပုဆိုး/ထမီကအိန္ဒိယက.. တိုက်ပုံ/အကျီ င်္က… စိနက…။
လူပြင်ညာရှိ.. ဘုန်းကြီးကားဝိတွေရမ်းအုပ်နေတဲ့.. စိတ်ထဲအိပ်မက်ထဲက.. ဘုရားသမိုင်းတွေလည်း.. စစ်သင့်နေပါပြီ…။
ကာဗွန်နဲ့ ရုပ်ဝတ္တုသက်တမ်းစစ်လို့ရပါတယ်..။ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ( ကျောင်းတကယ်တက်ပြီး ဘွဲ့ရတဲ့ဒေါက်တာ)သမိုင်းပညာရှင်တွေက.. စစ်ပေးလို့ရပါတယ်..
ဒီလိုနဲ့.. တိကျ စနစ်ကျ..အမှန်ဖြစ်သွားရမယ့်.. သမိုင်းလျှော်ဖွတ်.. သန့်စင်ရေးလုပ်သင့်ကြောင်း…။
သမိုင်းအမှန်ကို သိလာရင် ဘာဖြစ်ပီး…
မသိရင် .ဘာဖြစ်သဒုန်းး ဗျ…
သမိုင်းအမှန်တရား.. ပြောရမှာကို.. ကြောက်နေရ.. မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြရတာက.. ပြဿနာခင်ဗျ..
အမှန်တရားက.. အာရွှီးတွေရဲ့ …မုဒိန်းကျင့်ခံနေရရှာတယ်လေ…။
ကတိသစ္စာတည်သောအခါဝယ်.. နွယ်မြက်သစ်ပင်ဆေးဖက်ဝင်၏တဲ့.. အဲဒီလောက်တင်စားတာ..။
ပြောသမျှ.. လုပ်သမျှ ..ပြဿနာတက်…
အဲ ဂဏန်းတွေနဲ့ ဘုရင်ဆိုတာတွေက ဗြဟ္မဏ ကျမ်းကလာတာဗျ….။ ကိုယ့်လူကြည့်လည်းလုပ်ဦး ……..။
သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ လို့အော်ကြရအောင်
ရေးတာကတော့ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ချုိုးနှိမ် လွန်း အပျက်မြင်လွန်း ပါတယ် သရော်စာ ခေါင်းတပ်ရင်တော့ မပြောတတ်ဗျား၊ ဒါပေသိ ခွင့်ပြုထားတော့ ဆဲသဗျာ